ကျုပ်တို့နိုင်ငံ ကျုပ်တို့ပြန်မလာရင် | MoeMaKa Burmese News & Media
(တချို့တွေက တွေးတယ် … အရိုင်းစကားမပြောစမ်းနဲ့
ရှင်ဘုရင်ဖြစ် မင်းလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး …။
ကျုပ်တို့မြေ ကျုပ်တို့ရေ မဟုတ်ပေမဲ့
ညအိပ် ညနေ ဘယ်သွားသွားလာလာ
10 Responses to ကျုပ်တို့နိုင်ငံ ကျုပ်တို့ပြန်မလာရင်
*U AYE on April 4, 2012 at 8:14 am
win mon on April 4, 2012 at 10:15 am
ကိုလေး on April 4, 2012 at 11:36 am
အဖြစ်ခြင်းတူ ၊ ခံစားချက်တူ ၊ အနေအထားတူ ရပ်ဝေးမြေခြား နိုင်ငံသားများ အတွက် ကိုယ်စားပြုရေးပေးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ကဗျာတပုဒ်လို့ ခံစားမိပါတယ် ။ ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက် ၊
ခံယူချက် များကိုရေးသားဖေါ်ပြနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ အခြေအနေမှာ ကိုယ်စားရေးဖွဲ့ ပေးတဲ့ ကဗျာရှင်
ပြုံး on April 4, 2012 at 4:29 pm
သားသားကတော့ ဖိုးဇီးရိုးကို မေးကြည့်ချင်းတယ်၊တကဲဘယ့်တော့မှာမပြန်တော့ဘူးပေါ့။ပြန်ပါဖိုးဇီးရိုးရယ်တရားဥပဒေဟာ သားသားတို့လို့ဘာမှမရှိတဲ့ကောင်းတွေးအတွက်မတရားဥပဒဘဲ၊ကဗျာလေးကိုအားကျမိပါတယ်၊ဘာမှမရှိတော့မှပြန်ရင်းဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး။မြန်မာပြည်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဆန်းအိုပြည့်ရင်းတော့ပြန်ရမှာဘဲ။
ohnmar on April 4, 2012 at 5:30 pm
mgoogyaw on April 4, 2012 at 7:30 pm
This is an excellent poetry. The poet “Naing Oo Nyo”,feeling are same as All Burmese who are out of the country,and have to work any kind of job for survival,in Abroad. What he has mentioned is so true.I have totally appreciate his poetry,which means the true happenings that we have suffered for many years and still now. When will our country will be free from these aggressive, selfish, greedy,wicked, persons,who are ruling in Burma ?
kyu kyu aung on April 4, 2012 at 11:43 pm
when i read this poem,i feel like i look at myself at mirror.
TTS on April 4, 2012 at 11:44 pm
Dear Ko Naing Oo Nyo,
Your poem reflect all burmese peoples live outside Burma.All are the same as you said.We do not have chance to work or findajob asaordinary class.We love Burma and always remember the memorable time like Thyingyan.One day,we will return our country when freedam from fear.We do not wish to be rich.Only wish to librate from these selfish,arrogant and greedy for power.
Nai Kyaw Sein on April 5, 2012 at 12:48 am
ီနိုင်ဦးညို ရဲ.ကဗျာကို နေပူတော်က ဖွတ်ဝံကြီးတွေ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တံဆိပ်တပ် ဗိုလ်ချုပ်ရူးကြီးတွေ ရူးကြီးနောက်လိုက်စီးပွားေ၇းလုပ်ငန်း၇ှင်ကလိမ်ကကျစ်သမားတွေ ဖတ်လို.ပြီးသွားပြီ သူတို.ပြောတာတော့ တနေ.လုပ်လို.တနေ. မငတ်စေ၇ပါဘူးတဲ့ ပြန်လာပါ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တဲ့ အလုပ်ကိုလည်း မပင်မပန်းဘဲ လုပ်၇ပါစေ့မယ်တဲ့ …..လုပ်၇မယ့်အလုပ်ကတော့ သူတို.ပါလီမန်တက်မယ့် ဖိနပ်တွေကို တိုက်ချွှတ်ပေးရုံပါဘဲတဲ့ ခင်ဗျာ။
ma buma on April 5, 2012 at 10:53 am
Thank you for your poem…make me upsad…
လင်းအေးထင် - စူးစမ်းမိတဲ့ငနုံ -၂
စောဝေ - အဖေတူသားများ
နေပြည်တော်က အညတရ မဗေဒါ
ခင်လွန်း - ငုပ်ကောင်
ကျော်ဟုန်း - အယူအဆနဲ့စံ သတ်မှတ်ချက်
အောင်မောင်ဦး ● ကောင်းကင်ဘုံမှ နံရိုးများ